MyanPay givesasafe and secure receiving money via Internet.
MyanPay has been arranged for receiving money sent from your friends, customers/Members, and families automatically.
You can send the request money (Invoice) quickly to customers from Online and then you can receive money sent from customers conveniently.
MyanPay supports to receive money automatically from website for providing services, selling items, and so on from your personal website.
MyanPay also provides online fundraising when necessery to receive the donation of money from others for your foundations and donations.
ငွေလက်ခံရရှိကြောင်းကိုလဲ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Online တွင် အမြဲရှိနေရန် မလိုအပ်ဘဲ Mobile ဖုန်းသို့ SMS Alert ဖြင့် ချက်ချင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုများထံမှ ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးများကို လုံခြုံ စိတ်ချ လျင်မြန်စွာဖြင့် Online မှတဆင့် အလိုအလျောက် ငွေလက်ခံ ရယူနိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။.
လူကြီးမင်း၏ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုများထံသို့ Online မှတဆင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေတောင်းခံလွှာ ပေးပို့ပြီး ပေးပို့လိုက်သည့် ငွေများကို အဆင်ပြေစွာ လက်ခံရယူနိုင်စေရန်အတွက် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ Personal ကိုယ်ပိုင် Website များမှတဆင့် တစ်စုံတစ်ခု ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချခြင်း စသည့်တို့အတွက် Website မှတဆင့် အလိုအလျောက် ငွေလက်ခံ ရရှိနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အသင်းအဖွဲ့၊ အလှုအတန်းများအတွက် အခြားသူများထံမှ ငွေကြေးလှုဒါန်းခြင်းများကို လက်ခံနိုင်စေရန် Online မှတဆင့် အလှုငွေကောက်ခံခြင်းကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။